Fiatrehana ny fety - Hamafisina ny fitandroana ny filaminana
Fiatrehana ny fety – Hamafisina ny fitandroana ny filaminana
Publié décembre 19, 2019 par Book News
Polisy nasionaly miisa 1 700 miampy ny Polisy monisipaly no hitandro ny filaminana mandritra ny vanim-potoanan’ny fety.
Fanamafisana ny filaminana
Miara-miasa ny ministeran’ny Filaminam-bahoaka, ny ministeran’ny Fitaterana, ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetr’andro, ny Sekretariam-panjakana miandraikitra ny Zandarimaria ary ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra (CUA) miaraka amin’ny ministeran’ny Serasera sy ny kolontsaina , ny ATT sy ny Prefektioran’ny Polisin’Antananarivo ho fandrindrana ny fifamoivoizana: mialoha, mandritra ary ao aorian’ny fety.
Polisy nasionaly miisa 1700 miampy ny polisy monisipaly no ahetsika manomboka anio ka hatramin’ny 4 Janoary 2020.
Ao anatin’ny vanim-potoana ny fanomanana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao dia tsy mitsaha-mitombo ny olona mivezivezy eto an-dRenivohitra. Ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo Renivohitra mialoha, mandritra ary aoriana ny fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona dia hisy ny fepetra manokana izay horaisin’ny ministeran’ny Filaminam-bahoaka, ny ministeran’ny Fitaterana, ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetr’andro, ny Sekretariam-panjakana miandraikitra ny zandarimaria ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra miaraka amin’ny fiaraha-miasan’ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina , ny ATT sy ny Prefektioran’ny Polisin’Antananarivo.
Araka izany dia hampitomboina isa ireo Polisy nasionaly sy monisipaly misahana ny fifamoivoizana eny amin’ireto fihaonan-dalana ireto to any eny amin’ny Filatex, Anosizato, Ampasika, Tsarasaotra, Ambodimita, Analamahitsy, Ambanidia, Météo Ampasampito, Antanimena sy Ambohijatovo.
Hisy ihany koa ny fampitana ireo vaovao mivantana mahakasika ny fifamoivoizana eny anivon’ny haino aman-jery. Hohamafisin’ny Polisy monisipaly ny fandaminana sy ny fandrindrana ny toeram-piantsonan’ny taksibe. Ho esorina ireo fiara miantsona etsy sy eroa izay manelingelina ny fifamoivoizana.
Manentana ny olona hanaraka ny lamina
Ho avy ny fety, hitombo ny isan’ ireo mponina izay hihazo ny Renivohitra, koa manentana ny tsirairay araka izany ny tompon’andraikitry ny filaminana mba samy hanaraka ireo lamina izay napetraka ireo mba ho fisorohana ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra. Tsara ny manamarika fa efa nanomboka ny 17 Desambra izany fandaminana izany ary tsy hifarana raha tsy ny 4 Janoary 2020.